တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ ကောလိပ်​ကျောင်း​ အ​ရေး​အခင်း​ (ဒုတိယပိုင်း​) – DVB
တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ ကောလိပ်​ကျောင်း​ အ​ရေး​အခင်း​ (ဒုတိယပိုင်း​)
၂၀၀၁ ခုနှစ် ပတ်ဝန်း​ကျင်​လောက်က ပြင်ဦး​လွင်တပ်နယ်မှာ မြန်မာတပ်မ​တော် အရာရှိ​လောင်း​တွေ ​မွေး​ထုတ်​ပေး​တဲ့​ အဓိက စစ်​ကျောင်း​ကြီး​ သုံး​ကျောင်း​ရှိခဲ့​ပါတယ်။ အဲဒါ​တွေက​တော့​ ​ခြေလျင်တိုက်ခိုက်​ရေး​ တပ်​တွေအတွက် အရာရှိ​တွေ ​မွေး​ထုတ် ​ပေး​တဲ့​ စစ်တက္ကသိုလ်၊​ လက်ရုံး​တပ်​တွေအတွက် အင်ဂျင်နီယာ စစ်ဗိုလ်​တွေကို ​မွေး​ထုတ်​ပေး​တဲ့​ တပ်မ​တော် နည်း​ပညာတက္ကသိုလ်နဲ့​ တပ်မ​တော် နည်း​ပညာ​ကောလိပ်တို့​ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစစ်သင်တန်း​ကျောင်း​ကြီး​များ​ရဲ့​ ထုံး​စံတခုက​တော့​ သင်တန်း​သား​အသစ် ဂျူနီယာများ​ကို စီနီယာ သင်တန်း​သား​များ​က နှစ်အလိုက် အစ်ကိုကြီး​ ညီ​လေး​ ဆက်ဆံ​ရေး​ပုံစံနဲ့​ အဆင့်​ဆင့်​ အုပ်ချုပ်တဲ့​စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်​ခေတ် မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင်တန်း​ကျောင်း​မှာ သင်တန်း​ပေး​သလိုမျိုး​ကို ​မေမြို့​က တပ်မ​တော် စစ်တက္ကသိုလ်နဲ့​ တပ်မ​တော် နည်း​ပညာ တက္ကသိုလ်​တွေမှာ ကျင့်​သုံး​နေခဲ့​ပါတယ်။ ဂျူနီယာသင်တန်း​သား​များ​ကို စီနီယာများ​ သင်တန်း​သား​တွေက ခိုင်း​စေနိုင်ခွင့်​၊​ အပြစ် ​ပေး​နိုင်ခွင့်​များ​ရှိပါတယ်။ ရောက်ခါစ အပြစ်​ပေး​တာ သိပ်မကြမ်း​ပေမယ့်​ သင်တန်း​ကျောင်း​ရောက်ပြီး​ သုံး​လေး​လအကြာ ​ကျောင်း​သား​များ​ ​နေသား​ထိုင်သား​ကျလာပြီဆိုတဲ့​အခါမှာ အပြစ်​ပေး​တာ အလွန်ကြမ်း​လာပါတယ်။ "မင်း​တို့​ကို အပြစ်​ပေး​ချင်လို့​ ​ပေး​နေတာ မပါုတ်ဘူး​၊​ စစ်သား​နဲ့​တူ​အောင်၊​ ပုံစံကျ​အောင် ​လေ့​ကျင့်​ပေး​နေတာကွ နား​လည်လား​" လို့​ စီနီယာသမား​တွေက ​ပြောဆိုကြပါတယ်။ ​တော်ရုံတန်ရုံ အပြစ်​ပေး​တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိ​ပေမယ့်​ သဘာဝမကျတဲ့​၊​ ပုံစံမကျတဲ့​ အပြစ်​ပေး​မှုမျိုး​ကို​တော့​ ဘယ်သူမှ ခံနိုင်ရည် မရှိကြပါဘူး​။ ကျောက်ဖြုန်း​များ​ရှိတဲ့​ ​မြေပြင်​ပေါ်မှာ လက်သီး​ဆုပ်ပြီး​ ဒိုက်ထိုး​ခိုင်း​တာမျိုး​၊​ တမံသလင်း​ပေါ်မှာ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါး​ထဲမှာ ညာဘက်လက်သီး​ဆုပ်ထဲ့​ပြီး​ ဒိုက်ထိုး​ခိုင်း​တာမျိုး​၊​ လူနှစ်​ယောက်ကို ဖင်ပြန်​ခေါင်း​ပြန်ထပ်ပြီး​ ​ပေပါလှိမ့်​လို လှိမ့်​တာမျိုး​၊​ အလွန်ချမ်း​အေး​တဲ့​ ​ဆောင်း​ရာသီမှာ ညအချိန် ထမင်း​စား​တဲ့​ဇွန်း​ (သို့​) ကြက်ဥခွံနဲ့​ ​ရေချိုး​ခိုင်း​တာမျိုး​ စတဲ့​အပြစ်​ပေး​နည်း​ပေါင်း​စုံနဲ့​အပြစ်​ပေး​စေခိုင်း​ခဲ့​ပါတယ်။ တခါတ​လေ ညပိုင်း​စာဖတ်ချိန်အပြီး​ ည (၉) နာရီမှာ တပ်ခွဲကို ပြန်​ရောက်တဲ့​အခါ စီနီယာများ​က လာပြီး​ ​နေ့​ခင်း​ဘက်မှာ ​တွေ့​ထား​တဲ့​ အပြစ်​တွေ၊​ သ​ဘောမကျတာ​တွေကို "ဒီ​ကောင်​တွေ ခုထိပုံစံမကျ​သေး​ဘူး​၊​ ပုံမလာ​သေး​ဘူး​" ဆိုပြီး​ ည (၁၀) နာရီထိ၊​ တခါတ​လေ ညသန်း​ခေါင် ၁၂ နာရီအထိ အပြစ်​ပေး​တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ​နောက်မှာမှ အိပ်ရာဝင်ကြရပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့​ ထုံး​စံအရ တ​ယောက်မ​ကောင်း​ အများ​ (One for All ) ဆိုပြီး​ တ​ယောက်​ယောက် အပြစ်​ဖောက်မိ၊​ လုပ်မိရင် တပ်ခွဲတခုလုံး​၊​ တပ်ရင်း​တခုလုံး​ အပြစ်​ပေး​ခံကြရပါတယ်။ စီနီယာ​တွေက​နေ ဂျူနီယာ​တွေကို အပြစ်​ပေး​တာဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့​ သ​ဘောထား​ဖြစ်တဲ့​ ​အောက်လူ ငယ်သား​က​နေ အထက်လူ အရာရှိကို မလှန်နိုင်​အောင် ဦး​ချိုး​ထား​တဲ့​ သ​ဘောဖြစ်တယ်လို့​ အဲဒီသင်တန်း​သား​ တ​ယောက်က ပြန်​ပြောပြပါတယ်။ “အပြစ်​ပေး​ခံရတာနဲပတ်သက်ရင် ကျ​နော်တို့​က အပြစ်​ပေး​ခံရတာ ​တော်​တော်များ​တယ်ဗျ။ စီနီယာ၊​ ဂျူနီယာ သမား​တွေကို​တော့​ ကျ​နော်တို့​ ​လေး​စား​ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ မလိုအပ်တဲ့​နေရာမှာ သူတို့​အ​နေနဲ့​ အပြစ်တခုရှာပြီး​ အပြစ်​ပေး​တဲ့​အခါကျ​တော့​ ကျ​နော်တို့​လည်း​ လွတ်လွတ်လပ်လပ်​နေချင်တဲ့​ အချိန်မျိုး​မှာ သူတို့​အ​နေနဲ့​ မျက်စိ​ထောင့်​မကျိုး​တာလည်း​ ပါပါတယ်။ ကျ​နော် တခါကြုံဖူး​တယ်။ ကျ​နော့်​အ​မေ လာတုန်း​က ဧည့်​ဆောင်မှာ ဧည့်​သွား​တွေ့​တဲ့​အခါ ကျ​နော်က တိုက်ပုံဝတ်ပြီး​သွား​တယ်။ အဲဒီမှာ ကျ​နော့်​တို့​လက်ကို ၉၀ ဒီဂရီလွှဲရ​တော့​ ကျ​နော့်​လက်ထဲမှာ ​ဂေါ်လီလုံး​ထည့်​ပြီး​တော့​ လက်သီး​ဆုပ်ထား​တယ်။ သူတို့​အ​နေနဲ့​က first year ကျ​တော့​ လက်သီး​ဆုပ်ဖို့​ လိုအပ်တာကို။ အဲ​တော့​ လက်သီး​အမြဲတမ်း​ဆုပ်​အောင် ​ဂေါ်လီလုံး​ ထည့်​ထား​တယ်။ အဲလိုသွား​တုန်း​ ​ဂေါ်လီလုံး​ ဘယ်နား​ပြုတ်ကျသွား​မှန်း​မသိဘူး​။ လမ်း​လယ်​ခေါင်မှာ စီနီယာတ​ယောက်က ​ဂေါ်လီလှမ်း​စစ်​တော့​ ​ဂေါ်လီမပါဘူး​။ အဲ​တော့​ ကျ​နော် ဧည့်​တွေ့​ဆောင်ကို ကျွမ်း​ထိုး​ပြီး​ သွား​ရပါတယ်။ ကျ​နော့်​အ​နေနဲ့​ပြောရမယ်ဆိုရင်​တော့​ စစ်တပ်ရဲ့​ သ​ဘောတရား​အတိုင်း​ပါပဲ။ ​အောက်လူက​နေ အထက်လူကို မလှန်နိုင်​အောင် တခါတည်း​ ဦး​ချိုး​ထား​တဲ့​သ​ဘောပါပဲ။ ” [caption id="attachment_12045" align="alignright" width="310" caption="တပ်မတော်နည်းပညာ ကောလိပ်​"] [/caption] အဲဒါ​တွေထက်ဆိုး​တဲ့​ အပြစ်​ပေး​နည်း​များ​လည်း​ ရှိပါ​သေး​တယ်။ တ​ကျောင်း​လုံး​ သင်း​တန်း​သား​များ​ရဲ့​ စား​သောက်​ရေး​အတွက် သတ်မှတ်ထား​တဲ့​ စား​ရိပ်သာများ​ဆီကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်ခွဲအလိုက် စစ်သီချင်း​ သီဆိုပြီး​ သွား​ရောက်စား​ကြရပါတယ်။ စား​ရိပ်သာကို ချီတက်သွား​ရာလမ်း​မှာလည်း​ အရာရှိ​တွေ၊​ စီနီယာေ တွက​နေ အပြစ်ရှိတယ်လို့​ မျက်စိထဲ သ​ဘောမကျစရာ​တွေ့​ခဲ့​ရင် ယူဆခဲ့​ရင်လည်း​ အမြန်​ပြေး​သွား​ရတာ၊​ ဖား​ခုန်၊​ ​ရှေ့​နောက် တ​ယောက်ခါး​တ​ယောက် ဖက်ထား​ပြီး​ ခုန်ရတဲ့​ ရထား​စီး​ကဲ့​သို့​မျိုး​သော် အပြစ်​ပေး​တာ​တွေကို လုပ်တဲ့​နည်း​နဲ့​ ထမင်း​စား​ဆောင်မှာ သွား​စား​ရပါတယ်။ တခါတရံ အချိန်မရှိလို့​ဆိုကာ ထမင်း​စား​ချိန်ကို (၅) မိနစ်အတွင်း​ အပြီး​စား​ရပါတယ်။ (၅) မိနစ် ပြည့်​တာနဲ့​ ခရာမှုတ်လိုက်ကာ အမြန်တန်း​စီရပါ​တော့​တယ်။ ​နောက်ကျတတ်သူ​တွေအတွက်​တော့​ မသက်သာ​တော့​ပါ။ တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ကောလိပ် MTC မှာ စီနီယာ ဂျူနီယာ အပြစ်​ပေး​တာ ကြမ်း​သလို အစား​အ​သောက် ​ကျွေး​မွေး​တာလည်း​ ဆိုး​ရွား​လှပါတယ်။ ​ကျွေး​တဲ့​ထမင်း​ပါင်း​က ညံ့​ဖျင်း​ပြီး​ စား​မ​ကောင်း​ပါ။ စပါး​လုံး​နိုင်း​ချင်း​၊​ သဲတကျိကျိထမင်း​နဲ့​ ပဲပါင်း​ရည်ကျဲ၊​ အညံ့​စား​ ငါး​ပိ​ကြော် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း​ ငါး​ခြောက်​ကြော် (ကြက်စာ​ကျွေး​တဲ့​အခါမှာသုံး​တဲ့​ ငါး​ခြောက်)၊​ ကြက်ဥပြုတ်တလုံး​ သို့​မဟုတ် အမဲသား​ပါင်း​ ဒါမှမဟုတ် ဝက်သား​ပါင်း​ အတုံး​သေး​သေး​နှစ်တုံး​ တို့​သာ စား​ကြရပါတယ်။ အထက်မှညွှန်ကြား​ထား​သော စားသောက်စာရင်း​ဇယား​တွင် ​နေ့​တိုင်း​ အသား​ပါင်း​ ဒါမှမဟုတ် ငါး​ပါင်း​ တဆယ် ကျပ်သား​၊​ အရည်​သောက်ပါင်း​ရည်နဲ့​ ပါင်း​ကြမ်း​များ​ ပါရှိရပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ်လည်း​ စား​ရိပ်သာမှ ဖြစ်သလို ​ကျွေး​မွေး​ကြပြီး​ တပတ်မှ သုံး​ရက်​လောက်သာ အသား​ပါင်း​ (ဝါး​မရသည့်​အရွတ်တုံး​များ​) စား​ကြရပါတယ်။ အစား​အ​သောက် ​ကျွေး​မွေး​တာ ဆိုး​ရွား​တာနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ သူကြုံ​တွေ့​ရပုံကို အခုလို ပြန်​ပြောင်း​ပြောဆိုပါတယ်။ “မနက်ခင်း​ပိုင်း​ ကျ​နော်တို့​ကို လက်ဖက်ရည်နဲ့​ ထမင်း​ကြော်​ကျွေး​တယ်။ ထမင်း​ကြော်က တခါတ​လေ သိုး​နေတယ်။ သိုး​နေတဲ့​ ထမင်း​တွေကို ​ကြော်ထား​တာ။ လက်ဖက်ရည်က​တော့​ စီနီယာ​တွေနဲ့​ ကျ​နော်တို့​ လု​သောက်ရတဲ့​သ​ဘောမျိုး​။ တခါတ​လေ ကိုယ့်​မနက်စာထဲမှာ အသား​ဖတ်တဖတ် ပါလာသလိုပဲ။ လက်ဖက်ရည်ထဲမှာ ယင်​ကောင်​တွေ။ သန့်​ရှင်း​သပ်ရပ်မှု ညံ့​ဖျင်း​တယ်။ ဦး​စီး​ကွပ်ကဲနိုင်မှု မရှိဘူး​။ အဲ​တော့​ အ​ပေါ်ကလူ​တွေက တဆင့်​စား​တယ်။ ​အောက်ကလူ​တွေက တဆင့်​စား​တယ်။ အဲလိုစား​တော့​ ကျ​နော်တို့​ကို ​ပေး​တဲ့​ရိက္ခာနဲ့​ စား​သောက်မှုက ​တော်​တော်ဆိုး​ဝါး​ပါတယ်။ ​နေ့​လယ်ဘက်ဆိုရင် ပဲဟင်း​နဲ့​ ငါး​ခြောက်​ကြော်​ကျွေး​တယ်။ ကျ​နော်တို့​ကျောင်း​မှာ ဝက်မစား​ငါး​ခြောက်လို့​ ​ခေါ်တယ်။ ဝက်ကိုသွား​ကျွေး​တာ​တောင်မှ ဝက်မစား​တဲ့​ ငါး​ခြောက်မျိုး​ပေါ့​။ အဲလိုမျိုး​ နှစ်​ကောင်၊​ သုံး​ကောင် ​ကြော်​ကျွေး​တယ်။ တခါတ​လေ အဲဒီမှာ မုန်ညင်း​ပေါ​တော့​ မုန်ညင်း​ကျွေး​တယ်။ တခါတ​လေး​လည်း​ အမဲသား​ အရွတ်​ပေါ့​ ​ကျွေး​တယ်။ ဝက်စား​ဆိုရင်လည်း​ တတုံး​ကျွေး​တယ်၊​ ဝက်သား​အမျှင်က လူတ​ယောက်ရဲ့​ နှုတ်ခမ်း​မွေး​ထက် သာတယ်။ အဲလိုဟာမျိုး​တွေ ကျ​နော်တို့​ စား​သောက်ခဲ့​ရတယ်။” စစ်တက္ကသိုလ် D.S.A တပ်မ​တော်နည်း​ပညာတက္ကသိုလ် D.S.T.A. ​ကျောင်း​တွေရဲ့​ အစား​အ​သောက် ​ကျွေး​မွေး​တာဟာ တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ကောလိပ် MTC ထက် အလွန်​ကောင်း​မွန်တယ်လို့​ သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုသိရတဲ့​အတွက် MTC ​ကျောင်း​သား​တွေဟာ သူတို့​ကျောင်း​လည်း​ ဆယ်တန်း​အောင်​ခေါ်တာပဲ။ ငါတို့​လည်း​ ဆယ် တန်း​အောင်ပဲ ဘာ​ကြောင့်​ တို့​ကျောင်း​မှ ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ ဒီလိုအလုပ်ခံရတာလည်း​လို့​ မ​ကျေမနပ် ဖြစ်ကြပါ​တော့​တယ်။ ဒီအချက်ဟာလည်း​ MTC ​ကျောင်း​သား​တွေ မ​ကျေနပ်တဲ့​ အ​ကြောင်း​တချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ကောလိပ် MTC ​ကျောင်း​ရဲ့​ ​လေ့​ကျင့်​ရေး​ဟာ အလွန်ပြင်း​ထန်ပါတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ် (D.S.A) နဲ့​ တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ တက္ကသိုလ် (D.S.T.A) ​တွေထက်ပိုပြီး​ ပြင်း​ထန်ပါတယ်။ ကျောင်း​စတင်တည်​ထောင်ဖွင့်​လှစ်တာ မကြာ​သေး​တဲ့​အတွက် နာမည်​ကောင်း​ရ​အောင် လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ MTC ​ကျောင်း​သား​တွေကလည်း​ လိုတာထက်ပိုပြီး လေ့​ကျင့်​မှုပြင်း​ထန်တာကို မည်သူကမှ မ​ကျေနပ်ကြပါ။ ပညာသည်အ​နေနဲ့​ တပ်ရင်း​ တပ်ဖွဲ့​တွေမှာ တာဝန်ထမ်း​ခိုင်း​မှာဆိုပြီး​ အခု​တော့​ ​ရှေ့​တန်း​ထွက်ပြီး​ စစ်တိုက်ခိုင်း​မလို့​ အပြင်း​အထန် ​လေ့​ကျင့်​ပေး​နေတယ်လို့​ ​ဝေဖန်​ပြောဆိုလာပါတယ်။ “ကျ​နော်တို့​ မနက် ​လေး​နာခွဲထပြီး​ အ​ပြေး​လေ့​ကျင့်​ရတယ်။ အသည်း​အသန် ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ကြရတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျ​နော်တို့​အ​နေနဲ့​ နား​မလည်နိုင်တာတခုက ကျ​နော်တို့​တ​တွေဟာ အင်ဂျင်နီယာ​ကျောင်း​သား​တွေပါ၊​ စစ်တိုက်မယ့်​သူ​တွေမှ မဟုတ်တာ။ အဲ​တော စစ်တိုက်ရမယ့်​သူ​တွေမဟုတ်ဘူး​လို့​ ကျ​နော်တို့​ ယူဆထား​တယ်။ အဲအတွက် သူတို့​လေ့​ကျင့်​ပေး​တဲ့​ပုံစံက အင်ဂျင်နီယာ​ကျောင်း​သား​တ​ယောက်နဲ့​ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူး​။” တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ကောလိပ်ရဲ့​ တ​နေ့​တာလှုပ်ရှား​မှု​တွေဟာ အား​ချိန်၊​ နား​ချိန်မရှိ​အောင် ပင်ပန်း​လှပါတယ်။ ​လေ့​ကျင့်​ရေး​ ပြင်း​ထန်လွန်း​တာ၊​ စား​နပ်ရိက္ခာအပြည့်​အဝ မရရှိတာ​တွေဟာ ​ကျောင်း​သား​ထုရဲ့​ ရင်ထဲက မ​ကျေနပ်စိတ် ​တွေကို ပိုကြီး​ထွား​လာ​အောင် လုပ်​ပေး​နေခဲ့​ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း​ အထက်ကို တင်ပြတာမျိုး​ ဆန္ဒပြ​တောင်း​ဆိုတာမျိုး​ မလုပ်ခဲ့​ပါဘူး​။ စစ်သည်​ကျောင်း​သား​တွေဟာ စိတ်ထဲမှာ မျိုသိပ်ပြီး​ သည်း​ခံ​နေလာခဲ့​ကြပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သတင်း​ဆိုး​ကြီး​တခု ထွက်​ပေါ်လာပြီး​ တပ်မ​တော်နည်း​ပညာ​ကောလိပ်ရဲ့​ ​ကျောင်း​တော်သား​တွေရဲ့​ မ​ကျေနပ်မှု​တွေဟာ ​ပေါက်ကွဲလာပါ​တော့​တယ်။
တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ်ကေ်ာင်း အရေးအခင်း (ဒုတိယပိုင်း)
၂၀၀၁ ခုနွစ် ပတ်ဝန်းက်င်လောက္ကျပင်ဦးလင္တြပ္နယ္မျွာမန္မာတပ္မတော် အရာရွိလောင်းတြေ မြေးထုတ်ပေးတဲ့ အဓိက စစ်ကေ်ာင်းကြီး သုံးကေ်ာင်းရွိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတေကြတော့ျေခလ်င္တိုက္ခိုက်ရေး တပ်တေအြတကြ် အရာရွိတြေ မြေးထုတ် ပေးတဲ့ စစ္တက္ကသိုလ်၊ လက်ရုံးတပ်တေအြတကြ် အင္ဂ်င္နီယာ စစ္ဗိုလ်တေကြို မြေးထုတ်ပေးတဲ့ တပ္မတော် နည်းပညာတက္ကသိုလ္နဲ့ တပ္မတော် နည်းပညာကောလိပ္တိျု့ဖစ္ပါတယ်။
အဲဒီစစ်သင္တန်းကေ်ာင်းကြီးမ်ားရဲ့ ထုံးစံတခုကတော့ သင္တန်းသားအသစ် ဂ်ူနီယာမ်ားကို စီနီယာ သင္တန်းသားမ်ားက နွစ်အလိုက် အစ္ကိုကြီး ညီလေး ဆက္ဆံရေးပုံစံနဲ့ အဆင့်ဆင့် အုပ္ခ်ုပ္တဲ့စနစ်ျဖစ္ပါတယ်။ ဂ်ပန်ခေတ် မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင္တန်းကေ်ာင်းမွာ သင္တန်းပေးသလိုမ်ိုးကို မေမြို့က တပ္မတော် စစ္တက္ကသိုလ္နဲ့ တပ္မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တေမြွာ က်င့်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ ဂ်ူနီယာသင္တန်းသားမ်ားကို စီနီယာမ်ား သင္တန်းသားတေကြ ခိုင်းစေနိုင္ခငြ့်၊ အျပစ် ပေးနိုင္ခငြ့်မ်ားရွိပါတယ်။
ရောက္ခါစ အျပစ်ပေးတာ သိပ္မကြမ်းပေမယ့် သင္တန်းကေ်ာင်းရောက်ပြီး သုံးလေးလအကြာ ကေ်ာင်းသားမ်ား နေသားထိုင်သားက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမွာ အျပစ်ပေးတာ အလန်ြကြမ်းလာပါတယ်။ "မင်းတို့ကို အျပစ်ပေးခ်င္လို့ ပေးနေတာ မပာုတ္ဘူး၊ စစ်သားနဲ့တူအောင်၊ ပုံစံက်အောင် လေ့က်င့်ပေးနေတာကြ နားလည္လား" လို့စီနီယာသမားတေကြျေပာဆိုကြပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ အျပစ်ပေးတာကို ခံနိုင်ရည်ရွိပေမယ့် သဘာဝမက်တဲ့၊ ပုံစံမက်တဲ့ အျပစ်ပေးမှုမ်ိုးကိုတော့ ဘယ်သူမွ ခံနိုင်ရည် မရွိကြပါဘူး။
ကေ်ာက်ျဖုန်းမ်ားရွိတဲ့ျေမျပင်ပေါ်မွာ လက်သီးဆုပ်ပြီး ဒိုက္ထိုးခိုင်းတာမ်ိုး၊ တမံသလင်းပေါ်မွာ ဘယ္ဘက္လက္ဖ၀ါးထဲမွာ ညာဘက္လက်သီးဆုပ္ထဲ့ပြီး ဒိုက္ထိုးခိုင်းတာမ်ိုး၊ လူနွစ်ယောက္ကို ဖင်ျပန်ခေါင်ျးပန္ထပ်ပြီး ပေပါလွိမ့်လို လွိမ့်တာမ်ိုး၊ အလန္ခ်ြမ်းအေးတဲ့ ဆောင်းရာသီမွာ ညအခ်ိန် ထမင်းစားတဲ့ဇနြ်း (သို့) ကြက်ဥခြံနဲ့ ရေခ်ိုးခိုင်းတာမ်ိုး စတဲ့အျပစ်ပေးနည်းပေါင်းစုံနဲ့ အျပစ်ပေးစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
တခါတလေ ညပိုင်းစာဖတ္ခ်ိန်အပြီး ည (၉) နာရီမွာ တပ္ခြဲကျိုပန်ရောက္တဲ့အခါ စီနီယာမ်ားက လာပြီး နေ့ခင်းဘက္မွာ တြေ့ထားတဲ့ အျပစ်တြေ၊ သဘောမက်တာတေကြို "ဒီကောင်တြေ ခုထိပုံစံမက်သေးဘူး၊ ပုံမလာသေးဘူး" ဆိုပြီး ည (၁၀) နာရီထိ၊ တခါတလေ ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီအထိ အျပစ်ပေးတတ္ပါတယ်။ အဲဒီနောက္မွာမွ အိပ်ရာဝင်ကြရပါတယ်။ စစ္တပ်ရဲ့ ထုံးစံအရ တယောက္မကောင်း အမ်ား (One for All ) ဆိုပြီး တယောက်ယောက် အျပစ်ဖောက္မိ၊ လုပ္မိရင် တပ္ခြဲတခုလုံး၊ တပ်ရင်းတခုလုံး အျပစ်ပေးခံကြရပါတယ်။
စီနီယာတေကြနေ ဂ်ူနီယာတေကြို အျပစ်ပေးတာဟျာမန္မာစစ္တပ်ရဲ့ သဘောထာျးဖစ္တဲ့ အောက္လူ ငယ်သားကနေ အထက္လူ အရာရွိကို မလွန်နိုင်အောင် ဦးခ်ိုးထားတဲ့ သဘျောဖစ္တယ္လို့ အဲဒီသင္တန်းသား တယောက္ကျပန်ျေပျာပပါတယ်။
“အျပစ်ပေးခံရတာနဲပတ်သက်ရင် က်န္တောို့က အျပစ်ပေးခံရတာ တော်တ္မော်ားတယ္ဗ်။ စီနီယာ၊ ဂ်ူနီယာ သမားတေကြိုတော့ က်န္တောို့ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလိုအပ္တဲ့နေရာမွာ သူတို့အနေနဲ့ အျပစ္တခုရွာပြီး အျပစ်ပေးတဲ့အခါက်တော့ က်န္တောို့လည်း လတ္လြတ္လြပ္လပ်နေခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိုးမွာ သူတို့အနေနဲ့ မ်က္စိထောင့်မက်ိုးတာလည်း ပါပါတယ်။ က်နော် တခါကြုံဖူးတယ်။ က်နော့်အမေ လာတုန်းက ဧည့်ဆောင္မွာ ဧည့်သြားတြေ့တဲ့အခါ က်န္ကော တိုက္ပုံဝတ်ပြီးသြားတယ်။ အဲဒီမွာ က်နော့္တို့လက္ကို ၉၀ ဒီဂရီလွှဲရတော့ က်နော့်လက္ထဲမွာ ဂေါ်လီလုံးထည့်ပြီးတော့ လက်သီးဆုပ္ထားတယ်။ သူတို့အနေနဲ့က first year က်တော့ လက်သီးဆုပ္ဖို့ လိုအပ္တာကို။ အဲတော့ လက်သီးအမြဲတမ်းဆုပ်အောင် ဂေါ်လီလုံး ထည့်ထားတယ်။ အဲလိုသြားတုန်း ဂေါ်လီလုံး ဘယ္နာျးပုတ္က်သြားမွန်းမသိဘူး။ လမ်းလယ်ခေါင္မွာ စီနီယာတယောက္က ဂေါ်လီလွမ်းစစ်တော့ ဂေါ်လီမပါဘူး။ အဲတော့ က်နော် ဧည့်တြေ့ဆောင္ကို ကျမြ်းထိုးပြီး သြားရပါတယ်။ က်နော့်အနေနဲ့ျေပာရမယ္ဆိုရင်တော့ စစ္တပ်ရဲ့ သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။ အောက္လူကနေ အထက္လူကို မလွန်နိုင်အောင် တခါတည်း ဦးခ်ိုးထားတဲ့သဘောပါပဲ။ ”
အဲဒါတေထြက္ဆိုးတဲ့ အျပစ်ပေးနည်းမ်ားလည်း ရွိပါသေးတယ်။ တကေ်ာင်းလုံး သင်းတန်းသားမ်ားရဲ့ စားသောက်ရေးအတကြ် သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားရိပ်သာမ်ားဆီကို သက္ဆိုင်ရာ တပ္ခြဲအလိုက် စစ်သီခ်င်း သီဆိုပြီး သြားရောက္စားကြရပါတယ်။ စားရိပ်သာကို ခ်ီတက်သြားရာလမ်းမွာလည်း အရာရွိတြေ၊ စီနီယာတေကြနေ အျပစ်ရွိတယ္လို့ မ်က္စိထဲ သဘောမက်စရာတြေ့ခဲ့ရင် ယူဆခဲ့ရင္လည်း အျမန်ျေပးသြားရတာ၊ ဖားခုန်၊ ရွေ့နောက် တယောက္ခါးတယောက် ဖက္ထားပြီး ခုန်ရတဲ့ ရထားစီးကဲ့သို့မ်ိုးသော် အျပစ်ပေးတာတေကြို လုပ္တဲ့နည်းနဲ့ ထမင်းစားဆောင္မွာ သြားစားရပါတယ်။ တခါတရံ အခ်ိန္မရွိလို့ဆိုကာ ထမင်းစားခ်ိန္ကို (၅) မိနစ်အတငြ်း အပြီးစားရပါတယ်။ (၅) မိနစ်ျပည့်တာနဲ့ ခရာမှုတ္လိုက္ကာ အျမန္တန်းစီရပါတော့တယ်။ နောက္က်တတ်သူတေအြတက်ြတော့ မသက်သာတော့ပါ။
တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ် MTC မွာ စီနီယာ ဂ်ူနီယာ အျပစ်ပေးတာ ကြမ်းသလို အစားအသောက် ကျြေးမြေးတာလည်း ဆိုးရြားလွပါတယ်။ ကျြေးတဲ့ ထမင်းပာင်းက ညံ့ဖ်င်းပြီး စားမကောင်းပါ။ စပါးလုံးနိုင်းခ်င်း၊ သဲတက်ိက်ိထမင်းနဲ့ ပဲပာင်းရည္က်ဲ၊ အညံ့စား ငါးပိကြော် ဒါမွမဟုတ်ရင္လည်း ငါျးေခာက်ကြော် (ကြက္စာကျြေးတဲ့အခါမွာသုံးတဲ့ ငါျးေခာက်)၊ ကြက်ဥျပုတ္တလုံး သို့မဟုတ် အမဲသားပာင်း ဒါမွမဟုတ် ၀က်သားပာင်း အတုံးသေးသေးနွစ္တုံး တို့သာ စားကြရပါတယ်။ အထက္မွညွှန်ကြားထားသော စားသောက္စာရင်းဇယားတငြ် နေ့တိုင်း အသားပာင်း ဒါမွမဟုတ် ငါးပာင်း တဆယ္က်ပ်သား၊ အရည်သောက္ပာင်းရည္နဲ့ ပာင်းကြမ်းမ်ား ပါရွိရပါတယ်။ ဒါပေမယ္လည်း စားရိပ်သာမျွဖစ်သလို ကျြေးမြေးကြပြီး တပတ္မွ သုံးရက်လောက်သာ အသားပာင်း (၀ါးမရသည့်အရတ္တြုံးမ်ား) စားကြရပါတယ်။ အစားအသောက် ကျြေးမြေးတာ ဆိုးရြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူကြုံတြေ့ရပုံကို အခုလျိုပန်ျေပာင်ျးေပာဆိုပါတယ်။
“မနက္ခင်းပိုင်း က်န္တောို့ကို လက္ဖက်ရည္နဲ့ ထမင်းကြော်ကျြေးတယ်။ ထမင်းကြေ္ကာ တခါတလေ သိုးနေတယ်။ သိုးနေတဲ့ ထမင်းတေကြို ကြေ္ထာားတာ။ လက္ဖက်ရည္ကတော့ စီနီယာတေနြဲ့ က်န္တောို့ လုသောက်ရတဲ့သဘောမ်ိုး။ တခါတလေ ကိုယ့္မနက္စာထဲမွာ အသားဖတ္တဖတ် ပါလာသလိုပဲ။ လက္ဖက်ရည္ထဲမွာ ယင်ကောင်တြေ။ သန့်ရွင်းသပ်ရပ္မှု ညံ့ဖ်င်းတယ်။ ဦးစီးကပ္ကြဲနိုင္မှု မရွိဘူး။ အဲတော့ အပေါ်ကလူတေကြ တဆင့်စားတယ်။ အောက္ကလူတေကြ တဆင့်စားတယ်။ အဲလိုစားတော့ က်န္တောို့ကို ပေးတဲ့ရိက္ခာနဲ့ စားသောက္မှုက တော်တ္ဆောိုးဝါးပါတယ်။ နေ့လယ္ဘက္ဆိုရင် ပဲဟင်းနဲ့ ငါျးေခာက်ကြော်ကျြေးတယ်။ က်န္တောို့ကေ်ာင်းမွာ ၀က္မစားငါျးေခာက္လို့ ခေါ်တယ်။ ၀က္ကိုသြားကျြေးတာတောင္မွ ၀က္မစားတဲ့ ငါျးေခာက္မ်ိုးပေါ့။ အဲလိုမ်ိုး နွစ်ကောင်၊ သုံးကောင် ကြော်ကျြေးတယ်။ တခါတလေ အဲဒီမွာ မုန်ညင်းပေါတော့ မုန်ညင်းကျြေးတယ်။ တခါတလေးလည်း အမဲသား အရတ်ြပေါ့ ကျြေးတယ်။ ၀က္စားဆိုရင္လည်း တတုံးကျြေးတယ်၊ ၀က်သားအမ်ွင္က လူတယောက်ရဲ့ နှုတ္ခမ်းမြေးထက် သာတယ်။ အဲလိုဟာမ်ိုးတြေ က်န္တောို့ စားသောက္ခဲ့ရတယ်။”
စစ္တက္ကသိုလ် D.S.A တပ္မတ္နောည်းပညာတက္ကသိုလ် D.S.T.A. ကေ်ာင်းတေရြဲ့ အစားအသောက် ကျြေးမြေးတာဟာ တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ် MTC ထက် အလန်ြကောင်းမန္တြယ္လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုသိရတဲ့အတကြ် MTC ကေ်ာင်းသားတေဟြာ သူတို့ကေ်ာင်းလည်း ဆယ္တန်းအောင်ခေါ်တာပဲ။ ငါတို့လည်း ဆယ္တန်းအောင္ပဲ ဘာကြောင့် တို့ကေ်ာင်းမွ ဒီလျိုဖစ်ရတာလဲ။ ဒီလိုအလုပ္ခံရတာလည်းလို့ မက်ေမနပ်ျဖစ်ကြပါတော့တယ်။ ဒီအခ်က်ဟာလည်း MTC ကေ်ာင်းသားတြေ မက်ေနပ္တဲ့ အကြောင်းတခ်က်ျဖစ္ပါတယ်။
တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ် MTC ကေ်ာင်းရဲ့ လေ့က်င့်ရေးဟာ အလနြ်ျပင်းထန္ပါတယ်။ စစ္တက္ကသိုလ် (D.S.A) နဲ့ တပ္မတ္နောည်းပညာ တက္ကသိုလ် (D.S.T.A) တေထြက္ပိုပြီျးပင်းထန္ပါတယ်။
ကေ်ာင်းစတင္တည်ထောင္ဖငြ့်လွစ္တာ မကြာသေးတဲ့အတကြ် နာမည်ကောင်းရအောင် လုပ္တျာဖစ္ပါတယ်။ MTC ကေ်ာင်းသားတေကြလည်း လိုတာထက္ပိုပြီး လေ့က်င့်မျှုပင်းထန္တာကို မည်သူကမွ မက်ေနပ်ကြပါ။ ပညာသည်အနေနဲ့ တပ်ရင်း တပ္ဖြဲ့တေမြွာ တာဝန္ထမ်းခိုင်းမွာဆိုပြီး အခုတော့ ရွေ့တန်းထက်ြပြီး စစ္တိုက္ခိုင်းမလို့ အျပင်းအထန် လေ့က်င့်ပေးနေတယ္လို့ ဝေဖန်ျေပာဆိုလာပါတယ်။
“က်န္တောို့ မနက် လေးနာခြဲထပြီး အျေပးလေ့က်င့်ရတယ်။ အသည်းအသန် ရုန်းကန္လှုပ်ရွားကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် က်န္တောို့အနေနဲ့ နားမလည်နိုင္တာတခုက က်န္တောို့တတေဟြာ အင္ဂ်င္နီယာကေ်ာင်းသားတေပြါ၊ စစ္တိုက္မယ့်သူတေမြွ မဟုတ္တာ။ အဲတော စစ္တိုက်ရမယ့်သူတေမြဟုတ္ဘူးလို့ က်န္တောို့ ယူဆထားတယ်။ အဲအတကြ် သူတို့လေ့က်င့်ပေးတဲ့ပုံစံက အင္ဂ်င္နီယာကေ်ာင်းသားတယောက္နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရွိဘူး။”
တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ်ရဲ့ တနေ့တာလှုပ်ရွားမှုတေဟြာ အားခ်ိန်၊ နားခ်ိန္မရွိအောင် ပင္ပန်းလွပါတယ်။ လေ့က်င့်ရေျးပင်းထန္လနြ်းတာ၊ စားနပ်ရိက္ခာအျပည့်အ၀ မရရွိတာတေဟြာ ကေ်ာင်းသားထုရဲ့ ရင္ထဲက မက်ေနပ္စိတ် တေကြို ပိုကြီးထြားလာအောင် လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အထက္ကို တင်ျပတာမ်ိုး ဆန္ဒျပတောင်းဆိုတာမ်ိုး မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ စစ်သည်ကေ်ာင်းသားတေဟြာ စိတ္ထဲမွာ မ်ိုသိပ်ပြီး သည်းခံနေလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္မကြာခင္မွာပဲ သတင်းဆိုးကြီးတခု ထက်ြပေါ်လာပြီး တပ္မတ္နောည်းပညာကောလိပ်ရဲ့ ကေ်ာင်းတော်သားတေရြဲ့ မက်ေနပ္မှုတေဟြာ ပေါက္ကြဲလာပါတော့တယ်။
ဆှီဒငျနှငျ့ဖငျလနျတှငျ နတေိုးစဈအငျအားခထြားလြှငျ ဥရောပအတှကျ မရရောမှုအသဈ တိုးလာနိုငျ
တဘကျမှာ လကျသီးဆုပျရငျး တဘကျမှာ လကျဖွနျ့ထားတဲ့တိုငျးပွညျ
အာဏာရှငျတှေ လကျအောကျက ရုပျသေးတရားရုံးမြား
ခါးသီးတဲ့ စဈပှဲရဲ့ မြှျောရညျခကျြနဲ့ အနကျအဓိပ်ပာယျ
နိဂုံးဆိုးတာခငျြးတူမယျ့ တရုတျပွေးမငျးယုတျ နရသီဟပတနေဲ့ PDF ပွေး စဈဓားပွယုတျ မငျးအောငျလှိုငျ